लिंग उत्तेजित हुँदैन ? माकुराको विषले औषधिको काम गर्न गर्ने ! | Ratopati
लिंग उत्तेजित हुँदैन ? माकुराको विषले औषधिको काम गर्न गर्ने !
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeचैत ५, २०७५ chat_bubble_outline0
Photo source: www.thetalkingdemocrat.com
संसारभरिका करोडौं मानिसलाई चिन्ता र चासोमा पार्ने तर सार्वजनिक रुपमा भन्न नसक्ने वा मन नपराउने वा भन्न नहुने भनी बर्जित गरिएको एउटा यौन समस्या छ, जसलाई अंग्रेजी भाषामा Erectile dysfunction (ED) भनिन्छ । त्यसलाई नेपालीमा उल्था गर्ने हो भने त्यसको अर्थ लिंग उत्तेजित हुँदै नहुने, वा छोटो समयको लागि मात्र हुने वा कहिले हुने, कहिले नहुने भन्ने हुन आउँछ । विवाहित मानिसको लागि जिन्दगीमा सबैभन्दा लाजमर्दो, सबैभन्दा हीनताबोध गराउने कुनै कुराहरु हुन्छन् भने सबैभन्दा प्रमुख कुरा नै यही हो ।
यौन समस्याका कुराहरु चर्चा गर्नु हुन्न भन्ने रुढीवादी सामाजिक मान्यता र सोचका कारण मानिसहरु खुलेर यस समस्याबारे कुराकानी गर्न लजाउँछन्, डराउँछन् । तर वास्तवमा, यही समस्याले आजभोलि संसारका करोडौं मानिसहरु पीडित छन् र त्यसैले उनीहरुको पारिवारिक जीवन पनि दुःखमय बन्ने गरेको छ ।
यो समस्याको समाधानको खोजीमा लामो समयदेखि वैज्ञानिकहरु लाग्दै र जुट्दै आएका छन् । त्यसका लागि थुपै्र उपाय, विधि र औषधिहरु पनि पत्ता लागिसकेका छन्, लाग्ने क्रम जारी छ । त्यसैको पछिल्लो कडीमा वैज्ञानिकहरुले माकुराको विषले पनि यो समस्याको उपचारमा उपयोगी हुने कुरा फेला पारेका छन् ।
त्यसो त यो माकुरा तपाईं हामीले देख्दै आएको सामान्य, ऐरै गैरे नत्थु खैरे माकुरा चाहिँ होइन है । यो माकुरा त ब्राजिलमा पाइने त्यस्तो खतरनाक माकुरा हो, जसले टोक्यो भने मानिसलाई विचित्र खालको असर हुने गर्छ । वास्तवमै यो माकुराले टोक्यो भने टोकाइ खाने मानिसको लिंग घण्टौंसम्म उत्तेजित भइरहने हुन्छ । तर त्यो उत्तेजना सामान्य यौनक्रियाकलापको दौरानमा हुने जस्तो आनन्द दिने खालको हुँदैन, बरु त्यो त अत्यन्तै कष्टकर र पीडादायी हुने गर्छ ।
जर्नल अफ सेक्सुअल मेडिसिनमा प्रकाशित एक शोधपत्रमा उल्लेख भएअनुसार १३ देखि १५ सेन्टिमिटरसम्म लामो हुने, Phoneutria nigriventer नाम गरेको उक्त माकुराको विषमा PnPP-19 नामक रसायन पाइन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले प्रयोगशालामा मुसामाथि यो रसायनको प्रयोग गर्दा मुसाको लिंगोत्थान नहुने समस्या हल भएको र त्यसले कुनै नकारात्मक असर पनि नगरेको पाइयो ।
यसअघि पनि मुसामा नै गरिएको प्रयोगमा उक्त रसायनले मुसाको पुरुष लिंगको मांसपेशी तथा क्लिटोरिजमा रक्त प्रवाह गर्न मद्दत गरेको पाएका थिए । उनीहरुले के पनि फेला पारेका थिए भने माकुराको विषले मुसाको प्रजनन अंगको स्पन्जजस्तो मांसपेशीलाई आराम अवस्थामा पुर्याइदिने र फलतः त्यस क्षेत्रमा रक्तप्रवाह सजिलैसँग हुने स्थिति पैदा गराइदिन्छ । यौनाङहरुमा सहज रक्तप्रवाह हुँदा स्वभाविक रुपमा त्यसले लिंग उत्तेजित बनाउन मद्दत गर्ने गर्छ ।
पछिल्लो ताजा अनुसन्धानले देखाएअनुसार, माकुराको उक्त विषको आधारमा सिन्थेटिक औषधी तयार गरेर त्यसलाई इन्जेक्सन वा मलमको रुपमा प्रयोग गरेर लिंग शिथिल हुने तथा यौनक्रिया गर्न नसक्ने मानिसहरुको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा पनि अनुसन्धानकर्ताहरु प्रयोग गरिएको मलमको १० प्रतिशत जति भाग मात्रै छालाभित्र जाने भएकोले त्यसको प्रभाव तुलनात्मक रुपमा कम हुने बताउँछन् । अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाएको मुख्य कुरा के छ भने उच्च रक्तचाप र मधुमेहले ग्रसित मुसाहरुमा पनि यसको प्रयोग सुरक्षित नै देखियो । त्यसै गरी, गत वर्ष मानिसमा नै गरिएको चिकित्सीय प्रयोगमा पनि मुसामा परीक्षण गरिएको उक्त मलम सुरक्षित र प्रभावकारी नै रहेको पाइयो ।
त्यसो त उक्त माकुराको विषको त्यस किसिमको प्रभावबारे अनुसन्धानकर्ताहरुले सन् २००० को शुरुवातताका नै पत्ता लगाएका थिए । त्यसअनुसार, उक्त माकुराले टोक्दा त्यसको विषले स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने, मांसपेशीमाथिको नियन्त्रण गुम्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अत्यन्तै पीडा हुने, प्यारालाइसिस हुने तथा कसैकसैमा अन्ततः शरीरमा अक्सिजनको कमी भएर मर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ । सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने यो माकुराले टोकेको व्यक्ति पुरुष छ भने उसको लिंग अनौठोसँग घण्टौंसम्म उत्तेजित भइबस्ने पनि हुन्छ । तर त्यस्तो उत्तेजना अत्यन्त पीडादायी हुने र त्यस्तो व्यक्तिमा नपुंसकता हुने समेत खतरा रहन्छ ।
त्यसो त यो माकुराले टोक्नेबित्तिकै सबै व्यक्तिलाई माथि उल्लिखित खतराहरु देखा पर्दैन । विशेष गरी २.३ प्रतिशतहरुमा मात्रै, त्यो पनि विशेष गरी बच्चाहरुमा त्यो खालको जटील अवस्था आउन सक्छ र उनीहरुलाई त्यस टोकाइको उपचारको जरुरत पर्न सक्छ ।
मूलतः ब्राजिलमा पाइने उक्त माकुरा उरुग्वे, पाराग्वे र अर्जेन्टिनामा पनि पाइन्छ । यो माकुराले कीराफट्यांग्रा, भ्यागुतो र छेपारो खाने गर्छ । Phoneutria genus वैज्ञानिक समुहमा पर्ने यो माकुराका ८ प्रजातिहरु हुन्छन् । यो नाममा ग्रीक शब्दको phónos बाट लिइएको हो, जसको अर्थ प्राचीन ग्रीकमा हत्या हुने गर्छ ।
स्रोतः द इन्डिपेन्डेन्ट